> Resource > Video > DVR-MS Converter: Beddelaan DVR-MS in qaab kasta, oo ay ku jiraan DVD
Ma duubay TV qaar ka mid ah waxay muujinaysaa la Windows Media Player oo aad rabto si loogu badalo in ay qaabab kale? Wondershare DVR-MS Converter waa gargaar aad u weyn. Waxaa kuu saamaxayaa inaad cadaadin files DVR-MS in size yar, diinta DVR-MS in AVI, MP4, MPEG, wmv iyo aad u badan, iyo sidoo kale diinta files DVR-MS inuu ciyaaro dhammaan qalabka caanka ah sida iPhone, iPod, iPad, Madaxweyne Siilaanyo Oo, iyo wixii la mid ah.
1 dar files DVR-MS barnaamijka
Marka la rakibo dhamaato, abuurtaan barnaamijka. In uu furmo suuqa hoose, darto files DVR-MS adigoo gujinaya ah "Add Files" button oo iyaga xulashada ee galka TV la diiwaangeliyey. Dhammaan files DVR-MS ku daray muuqan doonaa sida thumbnail on saxaarad bidix iyo sida jir ah oo ku saabsan DVD ah menu suurto gal ah.
Ku xiran tahay nidaamka qalliinka, goobta TV diiwaan way ka duwan tahay. Waxaad ku beddeli kartaa iyada oo Windows Media Center menu. Laakiin by default,
Windows XP, C: Documents iyo SettingsusernameMy DocumentsRecorded TV
Haddii aad rabto in aad wax ka bedel ah video DVR-MS in Wondershare Converter DVR-MS, kaliya waxa loo muujiyo iyo xaq guji in ay doortaan "Edit" khiyaar qalab video tafatir sida goo, darsamaan, dalagga, isku shaandheyn, watermark, saamaynta, iwm
Dhammaan qaabab video caanka ah waxaa taageera si loogu badalo DVR-MS files, oo ay ku jiraan wax kasta oo video format caadiga ah (wmv, AVI, MP4, MOV, MPEG, iwm), iyo xitaa version 3D. Dooro qaab ka mid ah liiska qaabka wax soo saarka iyo samaysaa saldhigyo garaacida "Settings" doorasho haddii loo baahdo.
Gubasho DVR-MS in DVD waa doorasho wanaagsan haddii aad boos drive adag waxaa soo baxeen. Tani Converter DVR-MS sidoo kale u ogolaataa si aad u qoraa DVD menu dareen ka template. Haddii aad soo dhoofsadaan files ee "Guba" interface halkii "Beddelaan" interface, ee "Guba" button ka dhex muuqan doonaa meeshii "Beddelaan" button. Ogsoonow in aad kala dooran kartaa template menu DVD ah DVD marka aad ku dhufatey "Change Template". Waxaad u baahan doontaa ah drive DVD gubi iyo DVD cajalladaha ku dhammayn lahaa.
Sida aad arki karto, wax soo saarka profiles ayaa la si fiican u kala saaraa si aad u heli qaab wax soo saarka ah oo si deg deg ah. Dhammaan qalabka loo jecel yahay waxaa taageera, sida iPhone, iPad, iPod, PSP, Madaxweyne Siilaanyo, Blackberry, iwm Hadda laga bilaabo, waxaad si fudud u daawan kartaa TV muujinaysaa kombiyuutarka iyo kombuyuutarrada gacanta aad!
3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh video iyo bilowdo diinta DVR-MS
Waa ammaan in ay ku eegaan aad video DVR-MS hor diinta DVR-MS in qaab kale ama DVD gubanaya. Marka aad ku qanacsan tahay Xiisaha Leh, riix "Beddelaan" ama "Guba" badhanka si ay u dhamaystiraan hawlaha.
Badan oo ku saabsan qaab DVR-MS :
DVR-MS, gaaban Microsoft Digital Video Rikoodh, waa video ah oo lahaansho iyo qaabka weelka file maqal ah ee ay soo Microsoft. Waxaa loogu talagalay badbaadinta content TV diiwaan by Windows XP Media Center Edition, Windows Vista iyo Windows 7. Sida ASF ah (Systems Advanced Qaabka) qaab, video Multiple ama durdurrada audio ka mid yihiin qaab gaar ah oo la kordhiyo ku file .DVR-MS . Metadata iyo macluumaadka maamulka xuquuqda digital ayaa sidoo kale lagu kaydiyo faylasha DVR-MS. Windows Media Center ee Windows XP Media Center Edition, Windows Vista iyo Windows 7 dhalin doonaa files DVR-MS. The ilaaliyo files DVR-MS kaliya lagu ciyaari karo by qalab wax lagu qoro. Si kastaba ha ahaatee, files DVR-MS galmo la daawan karo oo bilaa saxar ah oo ku saabsan qalab wax socda Windows XP ama ka dib Windows ka hawlgala nidaamyada. Si aad u ciyaaraan files DVR-MS on qalab dheeraad ah sida iPhone, iPod, iPad, PSP, a Converter DVR-MS waa lagama maarmaan. By jidkii, DVR-MS laga yaabaa in lagu bedelay qaab Microsoft WTV, laakiin waxaad weli u bedeli karaan WTV in DVR-MS in Windows 7.
Badan oo ku saabsan ka baro farsamada khaaska ah ee Wondershare DVR-MS Converter for Windows.
Features Key ee DVR-MS Converter
Beddelaan DVR-MS videos in gebi ahaanba qaab kasta oo
Guba DVR-MS videos in DVD disc loogu daawashada TV-ga la DVD guriga ciyaaryahanka.
Edit DVR-MS videos qalab dhisay-in ka hor inta diinta iyo gubashadii
Beddelaan DVR-MS video in 3D u watch la koob 3D.
Beddelaan DVR-MS in HD wmv, HD AVI, MP4 HD, HD MPEG, MOV HD, iwm
Download oo ay qabsadaan videos web in qaab joogto ah